होशियार ! समातिनुहोला है ‘गौरी र जमुना’संग
मगलवार, जेठ ७, २०७६ विजय मल्ल
नेपालगन्ज: कुकुरलाई मानिसको साथी समेत भनिन्छ । कुकुर मानिसको साथी मात्र नभएर रक्षक पनि हो । तिहारमा हामी पुजा पनि गर्छौं । घरको सुरक्षादेखि अपराधी पत्ता लगाउने कामसमेत कुकुरको प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले कुकुरको महत्व विशेष छ ।
विश्वभरका प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा कुकुरको सहयोग लिँदै आएका छन् र ठुला ठुला अपराधका अपराधी पत्ता लगाउने गरेका छन् । अन्य देशका झैं हाम्रो देशको नेपाल प्रहरीले पनि कुकुरको सहायताले अपराधको अनुसन्धान गर्ने र अपराधी पत्ता लगाउँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतहरूले पत्ता लगाउन नसकेका अपराधी कुकुरको सहयोगमा पत्ता लाग्दै आएका छन् ।
कतिपय घटनामा मान्छेले पत्ता लगाएका अपराधीमा आशंका गर्ने गरे पनि कुकुरले पत्ता लगाएका अपराधी सही हुन् भन्ने विश्वास गर्न थालिएको छ र त्यो सत्य सावित भएको छ । यो कुकुरमा भएको अद्भुत क्षमताका कारण नै हो ।
विश्वभर लगभग २०० प्रजातिका कुकुर छन् । प्रजाति अनुसार कुकुरको फरक–फरक विशेषता हुने गर्छ । कुकुरमा वातावरणमा हुने सानोतिनो हलचल पनि थाहा पाउन सक्ने क्षमता हुन्छ । कुकुरले निकट भविष्यमा कुनै ठूलो दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोप आउन लाग्यो भने सूचना प्रवाह गर्न रोएर वा अन्य क्रियाकलापबाट चेतावनी दिने आम बुझाइ रहेको पाइन्छ । त्यसैले कुकुरले रोए वा असामान्य व्यवहार देखाए कुनै नराम्रो घटना हुन्छ कि भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा छ । यस्ता विशेषता भएकाले पनि अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले कुकुरको सहयोग लिने गर्छन् । नेपालमा गृह मन्त्रालय ले अन्य शाखा जस्तै नेपाल प्रहरी भित्र कुकुर शाखाको स्थापना गरेर अपराध अनुसन्धानमा सक्रिय रहेकोछ ।
२०६९ सालको निर्वाचनसगैं बाँकेको कोहलपुरमा रहेको कुकुर शाखामा ७ वटा कुकुर ल्याइयो । जसमध्ये २ वटा कुकुर ड्रक्स सर्च (लागुऔषध पत्ता लगाउने)को विज्ञ नै छन् । यस क्षेत्रमा अपराध अनुसन्धानमा गौरी र जमुना खटिएका छन् । यी दुई ले पश्चिम क्षेत्रमा तहल्कानै मच्चाएका छन् । ‘गौरी’ र ‘जमुनॉले गरेको अनुसन्धान फेल खाँदैन । सोमबार एकै पटक कुकुर ‘गौरी’ले सात जना लागुऔषधसहित ब्यक्तिलाई पक्रिन सहयोग गरेपछि अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउदै आएका विज्ञ कुकुरको चर्चा चुलिएकोछ ।
जर्मन सेफर्ड जातको ८ वर्षकी ‘गौरी’ कुकुरले नेपालगन्ज जमुनाहा नाकाबाट लागुऔषधसहित संलग्न ब्यक्तिलाई पक्रिन सफल भएकी थिइन् ।
अपराध अनुसन्धानमा सक्रिय कुकुरको सहयोगले प्रहरीलाई ठूलो उपलब्धी समेत मिलेको नेपाल प्रहरीको कुकुर शाखा कोहलपुरका प्रहरी निरीक्षक बासुदेव सुवेदी बताउँछन् ।
‘प्रहरीको आँखा छलेर अपराधीले अपराध गर्छन्, कतिपय चलाख अपराधीले प्रहरीलाई झुक्याउने हुदाँ सहजै उम्किने गर्छन् । तर, विज्ञ कुकुर जब अनुसन्धानमा उत्रन्छन् अपराधी उम्कन पाउदैन । मै हु भन्ने अपराधी पनि विज्ञ कुकुरको अगाडी केही लाग्दैन ।’–निरीक्षक सुवेदीले भने ।
‘कुकुर आफैंले अपराधी समातेर ल्याउदैन, अपराधीसम्म पुग्न बाटो देखाउँछ, तालिम प्राप्त कुकुरलाई घटना स्थलमा भेटिएका प्रमाणलाई सुझबुझकासाथ सुँघाउने हो भने अपराधी पत्ता लगाउन मद्दत मिल्छ ।’ कुकुरको सहयोगबाट प्राप्त उपलब्धिका बारेमा बताउदै प्रहरी निरीक्षक सुवेदीले भने–‘लागुऔषध र बाटो पत्ता लगाउने कार्यमा कुकुरबाट धेरै सफलता प्राप्त भएकोछ । यो अवधिमा १ सय ५३ वटा सानाठूला घटनाको अनुसन्धान गरिएको’ बताउदै सुवेदीले भने –‘प्राप्त सफलतामध्ये ११ वटा ठूलो घटनाको अनुसन्धानमा सफलता मिलेकोछ ।’
यस्तो छ प्रहरीले पाएको अनुसन्धानमा सफलता
-२०७२ चैत्र ७ गते बर्दिया ठाकुरद्वारा–४ सुतैया बस्ने ६८-६९ वर्षका जोरासिंहको हत्यारालाई पक्राउ गरेकोछ ।
-२०७३ बैशाख ११ गते जुम्ला जिल्ला देउपाल गाँउपालिका डुङ्ग्री खोला जाने सडक छेउमा रहेको चन्दननाथ मन्दिरबाट हराइरहेको मूर्ती सहित ३ वटा रुद्राक्ष पनि फेला पारेको ।
-२०७३ बैशाख १६ गते सल्यान छायाँक्षेत्र गाविस–९ की २२ वर्षिय सीता खान लगायत ४ जनाको हत्यामा संलग्न अपराधी संजय भारतीलाई पक्राउ गरेको ।
-२०७३ साउन १७ गते भारतीय बजार रुपैडिहाबाट ९ ग्राम लागुऔषध गाँजा चरेस सहित नेपाल भित्रिरहेको अवस्थामा एक जनालाई पक्रेकोछ ।
-२०७४ जेठ २६ गते दाङ्ग तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वस्ने बयापारी राजकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न कपुरकोट गाउँपालिका सिलवाङ्ग र रिमको विचमा अपराधीले प्रयोग गरेको बाटो पत्ता लगाई अपराधी पक्रेको ।
-२०७५ असोज २६ गते सल्यान जिल्ला शारदा नगरपालिका–८ सिमखर्क वस्ने अन्दाजी ५० वर्ष केवली नेपालीको हत्यामा संलग्न अपराधीलाई पक्रेको ।
यसअघि मध्य तथा सुदूरपश्चिमलाई कार्यक्षेत्र बनाएको कुकुर शाखा कोहलपुरले कर्णाली प्रदेश र प्रदेश पाँचमा अपराध अनुसन्धानमा सक्रिय रहेकोछ । विशेष गरि कर्णाली प्रदेश कार्य क्षेत्र रहेको शाखाले प्रदेश ५ को बुटलदेखि पश्चिम कर्णाली पुलसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएकोछ ।
भीआइपी सुरक्षादेखि पुल, कल्भट सम्म हुने अपराध र अपराधीको खोजीमा सक्रिय कुकुर शाखा माग भएअनुसार आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रहरी निरीक्षक सुवेदीले बताए ।
नेपाल प्रहरीले ठूलठूला अपराधको अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोगले सफलता पाउँदै आएका छन् । अपराध अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीसँग पोलिग्राफ मेसिन, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, डिएनए प्रोफाइलिङ युनिट, अटोमेटिक फिंगर प्रिन्ट, आइडेन्टिफिकेसन सिस्टमजस्ता आधुनिक प्रविधि रहेको छ ।
यसबाहेक अपराध अनुसन्धानको अर्को भरपर्दो माध्यम तालिम प्राप्त कुकुरलाई लिइन्छ । नेपाल प्रहरीसँग विभिन्न प्रकारका अपराधमा प्रयोग हुने आठ प्रजातिका कुकुर रहेको केन्द्रीय कुकुर तालिम केन्द्रको तथ्यांकले देखाउछ । लिजा, रेस्क्यू, सिया, जोली, ब्ब्रक, जुलेट, भुन्टी, सोल र डेनी, जंगे नामक कुकुरले नेपालको अपराध अनुसन्धानमा ठूलो सफलता हात पारेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपालको अपराध अनुसन्धानमा कुकुरको ईतिहास
२०२७ सालमा नेपाल प्रहरीले दुई प्रहरी अधिकृतलाई कुकुरबारे तालिम लिन मलेसियामा पठाएको थियो । त्यसपछि नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र सुरक्षामा कुकुरको प्रयोग गर्न थालेको हो ।
तर, नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग व्यवस्थित गर्न थालेको २०३२ सालदेखि हो । २०७५ सालको तथ्यांकले नेपाल प्रहरीसँग अपराध अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुने आठ प्रजातिका ८० वटा कुकुर छन् । त्यसमध्ये ४५ वटा कुकुर केन्द्रीय तालिम केन्द्रमा छन् ।
यसरी दिइन्छ कुकुरलाई तालिम
अपराधअनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले छिमेकी राष्ट्र भारत, थाइल्याण्ड, बेलायत, अमेरिकालगायतका देशबाट आठ प्रजातिका कुकुरका छाउरा ल्याउने गरेको छ । ती छाउरालाई छ महिना पुगेपछि तालिम दिन सुरु गरिन्छ । विभिन्न जातका कुकुरलाई तीन महिनाको आधारभूत तालिम दिएपछि क्षमताअनुसार वर्गीकरण गरेर अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग गरिन्छ ।
आधारभूत तालिममा कुकुरलाई अनुशासित बनाइने, मान्छेसँग घुलमिल हुन सिकाउने र बाँकी एक वर्षसम्म सम्बन्धित अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी तालिम गराइने नेपाल प्रहरीको कुकुर शाखा कोहलपुरका प्रहरी निरीक्षक बासुदेव सुवेदी बताउछन् ।
एउटा कुकुरलाई एक जनाले मात्र तालिम दिने र ह्यान्डलसमेत एकजनाले नै गरिन्छ । नेपाल प्रहरीसँग अहिले ट्रयाकर (बाटो पत्ता लगाउने), एक्सप्लोसिभ (विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने), सर्च एण्ड रेस्क्यू (खोजी र उद्धार) र ड्रक्स सर्च (लागूऔषध पत्ता लगाउने) गरी चार विधाका कुकुर छन् । यसरी अनुसन्धानमा खटिने कुकुरका लागि आवश्यक खाना, पिउने पानीको भाँडा प्रहरीले साथमा लिएर जाने गर्दछन् ।
कसरी पुग्छ अपराधिसम्म कुकुर ?
हामीलाई थाहा भएको कुरा हो कुकुरमा सुँघ्ने क्षमता बढी हुने गर्छ । सुँघ्ने क्षमताकै आधारमा कुकुरले अपराधी पत्ता लगाउने गर्छ । प्रत्येक मान्छेमा हुने गन्ध फरक–फरक हुन्छ । एक व्यक्तिको गन्ध अर्को व्यक्तिसँग मेल खाँदैन । त्यसैको आधारमा कुकुर अपराधीसम्म पुग्न सफल हुने गर्दछ । घटनास्थलमा भेटिएका सबुत प्रमाणमा भएको मानिसको गन्ध सुँघ्ने र कुकुरले अपराधमा को व्यक्ति संलग्न छ भन्ने पत्ता लगाउँछ । घटनास्थलमा कुनै सबुत प्रमाण नछाडे पनि मान्छेको पाइलाको गन्ध सुँघेर कुकुरले अपराधी पत्ता लगाउने गर्छ ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, जेठ ७, २०७६, ०६:०५:००
शुक्रवार, जेठ १६, २०७७ विजय मल्ल
बिहिवार, जेठ १५, २०७७ विजय मल्ल